Maareynta Maareynta Nolosha ee Conga: Hagaajinta Waxtarka Iibinta Iyadoo Dukumiintiga Ottomaatigga Shaqada | Martech Zone
Sabtida, Oktoobar 10, 2020 Sabtida, Oktoobar 10, 2020 Douglas Karr
Samaynta ganacsi u arka mid aan macmiil lahayn macmiilka hortiisa suuqa oo ku sii kordhaya kakanaanta ma aha wax fudud. Khibrada Conga iyo xalka dhameystiran ee howlaha ganacsiga - howlaha hareeraha ka socda Isku habee Qiimaha Qiimaha (CPQ), Maareynta Nolosha Macaamiisha (CLM), iyo Dukumiintiyada Dijital ah - waxay ka caawisaa ganacsiyada inay si kalsooni leh ula tacaalaan kakanaanta si ay u bixiyaan waayo-aragnimo macaamiil oo aan muran lahayn iyo dardargelinta dakhliga.
Iyadoo Conga, ganacsiyada ay si dhakhso leh ugu socdaan si ay ula kulmaan baahida macaamiisha maanta halka ay sii kordhayaan firfircoonida si loogu diyaar garoobo berri aan la hubin. Suugaanta Isbadalka Dijital Dijital ah ee loo yaqaan 'Conga' waxaa loogu talagalay inay la shaqeyso isku dhafka tikniyoolajiyadda shirkaddaada iyo inay si toos ah ula fal gasho CRM-gaaga.
Waa maxay qandaraaska Maareynta Nolosha?
Maareynta Heshiiska Nolosha Nolosha waa mid firfircoon, maarayn habeysan oo qandaraas laga bilaabo bilow ilaa abaalmarin, u hoggaansanaan, iyo cusbooneysiin. Hirgelinta CLM waxay u horseedi kartaa horumar weyn xagga keydinta kharashka iyo waxtarka.
Maareynta Maareynta Nolosha ee Conga
Conga CLM waa dhammaad illaa dhammaad maaraynta meertada nolosha (CLM) xalka oo dhammeeya xilligii gacanta iyo geeddi-socodka qandaraasyada isku-dhafan iyo gaarsiiya khibrado tayo sare leh macaamiisha gudaha iyo dibaddaba. Conga CLM waxay wadataa qandaraas heer sare miisaanka, waxay yareyneysaa waqtiyada wareegga, waxay hagaajineysaa natiijooyinka gorgortanka, waxayna yareysaa halista. Waxaa lagu dhisay daruuraha, Conga wuxuu si aan kala go 'lahayn ugu xiraa xalalka CRM si loo fududeeyo howlaha ganacsiga. Conga waxay awood siisaa dhamaan waaxaha safarkooda si ay u gaaraan heer ganacsi sare.
Qolka xalka dhammeystiran ee Conga wuxuu awood u siinayaa dakhliga, howlaha, iyo kooxaha sharciga ah inay si fudud ugu maareeyaan dhibaatooyinka ganacsiga. Waxaan u joognaa inaan ka caawinno dardargelinta ganacsiga, hagaajinta howlaha, iyo bedelida khibradaha macaamiisha. Xal u helista baaxad kasta oo ganacsi, waxaa naga go'an inaan la kulanno ganacsiyada si sax ah halka ay joogaan si aan aragti fog uga qaadno halka ay aadayaan.
Frank Holland, agaasimaha guud ee Conga
Conga CLM waa aaladdii ugu horreysay ee maaraynta qandaraaska ee u adeegta dhammaan heerarka qaangaadhnimada min bilow ilaa khabiir dhammaan qandaraasyada. Suuqa sharciga waligiis ma helin hal qurbaan oo ka taga dhamaadka-dhamaadka ilaa dhamaadka-sare ee qalooca qaangaarnimada. Natiijo ahaan, Conga CLM kaliya uma fiicna shirkadaha xawaaraha koraya, laakiin awoodaha heerka-ganacsiga hadda waxaa heli kara ganacsiyada SMB / dhex-dhexaadka ah qiimo jaban.
Isticmaalayaasha Salesforce waxay si toos ah ugu maamuli karaan qandaraasyada arjiga inta ay otomaatiga u maareeyaan qandaraaska nolosha (CLM) laga soo bilaabo abuurka ilaa saxiixa. Taasi kaliya maahan, laakiin kooxdaada iibka ayaa keydin karta oo maamuli karta qandaraasyada aan xadidneyn, soo saari kara warbixinno, la socoshada isdhexgalka, iyo inbadan oo dheeri ah.
Qalabaynta Aaladda Doga Dukumintiga
Dukumiintiyada Conga waxay fududeyneysaa oo kordhineysaa dukumiintiyada maalinlaha ah ee muhiimka ah iyadoo la sii daayo xoogsatada si wax badan loo qabto. Ururadu si fudud oo hufan ayey u abuuri karaan, u maamuli karaan, ula shaqeyn karaan, oo u saxiixi karaan dhammaan dukumiintiyada muhiimka u ah ganacsiga.
Aaladda otomaatiga ah ayaa shaqada ka saareysa nidaamka waxayna ka saareysaa talaabooyinka isticmaalaha ee khaladaadka u horseedi kara, waxay keydineysaa waqti qiimo leh, waxayna sare u qaadeysaa waxtarka iyo wax soo saarka. Awoodda, isku-darka awoodaha eSignature waxay fududeynayaan weligood sidii loo dhammaystiri lahaa dukumiintiyada muhiimka u ah ganacsiga, dukumiintiyada sharci ahaan ku xiraya meel kasta. Iyada oo xalka 'Doga Documents', wareegyada ganacsiga waxaa lagu damaanad qaadayaa inay noqdaan kuwo dhaqso badan.
Waa maxay Isku-xidhka, Qiimaha, Quote (CPQ)?
Isku habeyn, sooshalka qiimaha softiweerku waa erey loo adeegsado warshadaha ganacsiga-ganacsiga (B2B) si loo sharaxo nidaamyada softiweer ee ka caawiya iibiyayaashu inay sheegaan alaabada adag iyo kuwa la qaabeyn karo
Dejinta Conga, Qiimaha, Xalka Quote
Conga CPQ waa a habee qiimaha qiimaha (CPQ) xalka ku hagta kooxaha iibka inay dhisaan oo ay wanaajiyaan dalabyada iyagoo awood u siinaya iibiyeyaasha inay doortaan iskudhafka ugu wanaagsan ee alaabada iyo adeegyada (rukhsadaha, adeegyada gadaal, iyo adeegyada xirfadleyda ah) ee laga helo buuga guud. Conga CPQ ayaa markaa habeynaysa xalalka, fuliya moodellada qiimaha, waxayna soo saartaa sicirka ugufiican ee lagu guuleysto heshiisyada. Conga CPQ wuxuu fududeeyaa khibrada iibinta ee wacyiga iibsadaha iyo ujeedka inuu wax ku iibsado iyada oo loo marayo ficilka iibsiga, ka caawinta ururada inay gaaraan heer sare ganacsi iyagoo awood u siinaya kooxaha iibka inay wax ku iibiyaan si wax ku ool ah wakhti yar.
Teknolojiyadaha loo yaqaan 'Conga Technologies' waxay awood u siinayaan ganacsiyada nooc kasta oo ay yihiin, dhammaan warshadaha adduunka oo dhan, inay ka dhigaan lambarrada dukumiintiyada iyo qandaraasyada ka dhigaya ganacsigooda inay socdaan. Natiijooyinka ayaa keenaya keydinta kharashka, faa'iidooyinka ka sarreeya, helitaanka degdegga ah ee alaabada iyo adeegyada, iyo xawaareynta ganacsiga.
Hesho Demo Congo
Tags: b2bcongaconga clmcga cpqotomaatiga qandaraaskamaaraynta heshiiskacpqCRMmaaraynta nolosha nolosha macaamiishamaaraynta dukumiintigaadegsaxeexiibingawaarida shaqada